Ecopod Quintay Frente al Mar (Llega sin contacto) - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguEcopod Quintay
UEcopod Quintay yi-Superhost
Ukuntywiliselwa kwimozulu ekhethekileyo yeMeditera eChile, indawo yethu ikumema ukuba uthathe umoya omtsha kwaye ulungelelaniswe nempilo kunye nokuzinza. Ngokusekwe kwingqikelelo ye-Eco Lodging, injongo yethu kukuba yinxalenye yamava okuHamba angenakulibaleka eChile.
AmaHlathi eNative, amaLwandle, ukuHamba, iindawo zokutyela zaselwandle, iScuba Diving kunye namaxesha akhuthazayo aya kukhokelela kumxube omhle wendalo entle, ukuphumla okugqwesileyo kunye namava amakhulu elali yokuloba ongasokuze uwalibale.
I-Eco Pod yethu iya kukusa kwindawo ekhethekileyo apho uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze uzive ukhululekile kwaye ushushu. Iphefumlelwe yi-architecture yeenqanawa kunye nezindlu ezincinci kunye nendawo yayo, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi "Playa Chica", kuya kukwenza uzive unethamsanqa.
4.96 · Izimvo eziyi-275
Simi kwiikhilomitha ezi-2 ukusuka kwidolophu yaseQuintay. Asinabamelwane, ekubeni siphakathi kwehlathi kwaye sisondele kakhulu elwandle, ngoko sihlala neentlobo ezininzi zeentaka kwaye ukuba sinethamsanqa, phambi kwethu sibona intsapho yeminenga idlula.
Ukuthi cwaka yinto enokonwatyelwa, kunye noxolo esilunikwa kukuzola kolwandle ngokuhambisana nempepho yomoya kunye nesandi sehlathi.
Iinkwenkwezi ezingapheliyo zihlamba isibhakabhaka sethu kwaye ukutshona kwelanga kusinika iimbono ezintle ngemibala epinki kunye ne-orenji.
Kwiindawo ezisingqongileyo unokwenza iindlela ezahlukeneyo zokuhamba ngeendlela ezinomhlaba omhle. Ukusuka kumnyango we-Ecopod kukho indlela edlula kwihlathi lemveli elithi "Boldos", "Lúquumos" kunye ne "Peumos" ukuya e-Playa Chica, enye yezinto ezixabisekileyo zendalo zommandla.
Umbuki zindwendwe ngu- Ecopod Quintay
I-Ecopod yiprojekthi yoSapho eyakhiwe kufutshane nendlu yethu. Sihlala kwaye sisebenza eQuintay, ke sisondelelene kakhulu nondwendwe lwethu xa kukho into abayifunayo kuthi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Valparaíso